सेप्टेम्बर 17, 2019 सेप्टेम्बर 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, मन्त्र, रोग
मन्त्रद्वारा रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा यो युगमा अधिकांशलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर यसमा जनविश्वास छ । आज मैले यसै विषयमा पाठकहरूलाई प्रकाश पार्ने जमर्को गर्नेछु । घटना केहि महिना पहिलाको हो । औषधि सेवन गरेर निको नभएकाले मलाई बोलाउन आउनु भयो । मैले बिरामीलाई हेरे र भने औषधि खुवाउनुहोस् निको हुन्छ ।
तर उहाँले पानी फुकिदिन आग्रह गर्नुभयो म वैध बाको छोरा भएकाले शायद होला केहि ज्ञान हुनुपर्छ भनेर मलाई आग्रह गर्नु स्वभाविक थियो । थोरै पानी मागे पानीमा बेसार र खरानी राखेर मन्त्र पढेर पानी फुकेर खान दिए ठिक उत्तिखेर नै पेट दुख्न निको भयो । शायद उहाँले खाएको औषधिले निको भयो या मन्त्रले भयो तर निको भएको थियो ।
विश्वासपुर्वक गरेको जस्तोसुकै काम ठिक हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । तर कतिपय रोगमा तत्क्षण प्रभाव पारेका अनेकौं अनुभव मसंग छन् तर मैले यो काम गर्दिन कोही कसैले आग्रह गरेको अवस्थामा भने गरिदिन्छु । एकपटक नेपाली मुस्लिम परिवारका एक जना युवा बाबुलाई पिलिया जण्डिस रोग लागेर म काहाँ ल्याउनु भएको थियो ।
हामीले उहाँलाई औषधि दिएर पठाएका थियौं निको भएन । Bilirubin ४.५ बाट ५० सम्म पुगेको थियो । हामीले भरतपुर रिफर गरेको अझ बढेर मानिस पुरै पहेलो भयो तर निको भएन । धेरै खर्च गर्नुभयो समस्या हल नभएपछि पुन मकहाँ ल्याउनुभयो उहाँको उपचार मैले मन्त्रद्वारा शुरु गरे तर आश्चर्य उहाँ निको हुनुभयो आज उहाँ कतारमा हुनुहुन्छ ।
मन्त्रविनाको कुनै पनि अक्षर छैनन् । पूर्वीय सभ्यतामा मन्त्रको महत्व कति छ भन्ने बुझ्न यही भनाइ पर्याप्त हुनसक्छ । उचित तरिकाले प्रयोग गर्न जाने हरेक अक्षर मन्त्र हुन्छन् तर के हामी सबै यो कुरासँग सहमत हुन सकौंला त ? कतिपयले मन्त्रलाई अन्धविश्वाससँग जोड्ने गरेका छन् भने कतिपयले मन्त्र शक्तिमाथि विश्वास राखे पनि उनीहरू यसको वैज्ञानिक पक्षसँग अनविज्ञ छन् । हामीमध्ये कमैले मात्र स्वास्थ्य र मन्त्रको वैज्ञानिक सम्बन्ध बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । जबकि स्वास्थ्य र मन्त्रको वैज्ञानिक सम्बन्धसँग परिचित हुन सके पहिलेभन्दा राम्रो जीवन बिताउन सकिने कुरा निर्विवाद छ । आउनुस यो मन्त्रको साहेताबाट केहि रोग निको बनाउन प्रयत्न गरौं यो सवै अनुभव गरिएका मन्त्र उपचार हुन ।
ॐ नमो आदेश गुरूको रामचन्द्र सर सावधान काला पीला रोता धोता पी पीला कड से राम चन्द्र जी तथा मेरी भक्ति गुरूकी शक्ति फूरो मंत्र इश्वरो वाचा ।
तरिका : कटोरामा पानी भरेर ७ दिनसम्म सियोद्बारा झार्नाले ठिक हुन्छ
आँखाको रोशनी बढाउन
अजातश्च सुकन्याश्च वन में शक्रम् साअश्यात् ।
खाना खाइसकेपछी अन्तमा थोरै पानी हातमा लिएर सात पटकसम्म यो मन्त्र पढेर आँखामा छ्याप्नाले कर्मस आँखाको ज्योति बढ्दछ । यो मन्त्र मेरो बुबाले प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो । ८० बर्षको उमेरमा पनि चस्मा नलगाई पढ्नु हुन्थ्यो ।
खाना पचाउने मन्त्र
अगल्य:कुम्मकर्णश्च वा वातल आहरणार्थ स्मेरतमो यश्च पच कुम्भ ।
प्रयोग गर्ने तरिका:खाना खाई सके पछि यो मन्त्र पढेर पेटमा मसार्नु खायको सवै हजम हुन्छ ।
या मुसब्बिब बल असबाब ।
यो मन्त्र मैले सोयम अनुभव गरेको छु कोरा कागजमा ५०१ पटक लेखेर सिद्ध गरेर तिजोरीमा राख्नुस र एउटा पर्समा राख्नुस स्वयम अनुभव गर्नु हुनेछ ।
नोट : मन्त्रद्वारा उपचार गर्ने तरिका मेरो बुबाको थियो । सबैको ज्ञान बढोस् भन्नाका लागि यहाँ दिएको छु लाभ उठाउनु हुनेछ ।
← सोमबारका यी पाँच काम गरेमा पुरा हुनेछ मनोकांक्षा
कुलो भत्किदा ५० हेक्टर जमिनमा सिंचाई अवरुद्ध →
One thought on “मन्त्रद्वारा के रोग ठिक हुन सक्छ ? आजको युगमा मन्त्रमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने”